Samsung na-ekpughe data ọhụrụ na ekwentị ya | Gam akporosis
Samsung gosipụtara data ọhụrụ na ekwentị mpịachi ya na CES 2019
Mgbe o gosipụtara ya na November, anyị amachaghị banyere ekwentị foldable Samsung. Companylọ ọrụ Korea bụ ụbọchị ndị a na Las Vegas ebe a na-eme CES 2019. N'ụzọ dị otú a, anyị enweela ike ịchọtakwu banyere ekwentị. Firmlọ ọrụ Korea emeela ihe omume onwe onye, ​​bụ nke e gosipụtarala data dị iche iche banyere ngwaọrụ a. Ekele dịrị ha anyị enwetala echiche nke atụmatụ ha.
Ọtụtụ nke obi abụọ banyere ekwentị mpịachi nke akara Korea bụ maka mmalite ya, na mgbakwunye na ụbọchị ma a ga-ebido ya mba ụwa ma ọ bụ na ọ gaghị. Ọ dabara, ihe omume Samsung a nkeonwe hapụrụ anyị azịza ụfọdụs n'echiche a. Ihe omuma ohuru gini ka anyi mara ugbu a banyere ekwenti?
Otu n'ime nkọwa izizi nke amara, maka ọtụtụ ndị isi ụlọ ọrụ, bụ na ekwentị a adịla njikere. O yiri ka enwere akụkụ ole na ole ị ga-agwụ, ụfọdụ mmezi ikpeazụ ka ihe niile wee zuo oke. Ezigbo ozi ọma, nke pụtara na ọ dịlarị nso ịbụ onye ọchịchị na anyị nwere ike ịhụ etu o si arụ ọrụ. Mana nke a abughi naanị ihe si na Samsung pụta na CES 2019 a na Las Vegas.
Bọchị mmalite na ngosipụta nke ngwaọrụ a bụ otu n'ime ihe omimi dị omimi. N'ikpeazụ, Ngwaọrụ Samsung a na-abịa oge anwụ a. Ya mere, anyị nwere ike tinyeworị oge ọkọchị nke 2019 na atụmatụ anyị. N'aka nke ọzọ, ekpughela na ekwentị dị gịrịgịrị mgbe ekpughere ya karịa mgbe anyị na-apịa ya ka ọ rụọ ọrụ dịka ama. Ọ bụ ezie na anyị enweghị ọnụ ọgụgụ na ọkpụrụkpụ ya ọkpụrụkpụ maka ugbu a.
Ekwuru ya na Samsung mere atụmatụ ịmepụta nkeji ole na ole nke ngwaọrụ ahụ. O yiri ka nke a ọ̀ bụ eziokwu. A na-ekwu na ha ga-aga ire ere 1 nde ekwentị nkeji n'ụwa nile. Ọzọkwa, ọnụahịa ekwentị agaghị adị ọnụ ala, dịka a tụrụ anya ya. N'okwu a anyị nwere atụmatụ. Ọ na-atụ anya na-gburugburu 1339 dollar Ahịa. Anyị amaghị maka ugbu a ọnụahịa ya na euro, mana anyị nwere ike nweta echiche.
Dị ka ọ bụ ngwaọrụ dị oke ọnụ, ụlọ ọrụ ahụ na-achọ ndị okenye toro eto, site na 40 afọ na ndị ọkachamara, dịka otu nwere ike ịmasị ịzụta ekwentị a. Nke a bụkwa ikpe n'ihi na ọ bụ ekwentị nke dị Ezubere maka ndị ahụ na-eji ọtụtụ ọrụ. Ekele maka ekwentị ahụ, ha agaghị ebu mbadamba mgbakwunye na smartphone. Ha nwere ike ime ya niile na otu ngwaọrụ.
Samsung kwuru na ha na-agbazi okwu ole na ole na ekwentị, nke mere na ọ ga-adị maka ire ere n'oge ọkọchị a. Anyị mechara nwee ụbọchị, nke ụlọ ọrụ ahụ gosipụtara n'onwe ya, maka mbata nke mpịachi ngwaọrụ a site na ụlọ ọrụ Korea. Ozi ọma, na ndị ọrụ na-echere ogologo oge. Na mgbakwunye, ọ bụ ezi uche ụbọchị, ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ achọghị ka ọ bụrụ onye a ma ama nke Galaxy S10 nso, nke a na-atụ anya na a ga-ewepụta na MWC 2019 na ihe ha bụ na-eri ọtụtụ data ụbọchị ndị a.
Obi abụọ bụ na ihe na-aga ime Galaxy Note 10, nke ga-agbaso usoro a n'etiti August na September. Amabeghị na a ga-enwe mgbanwe na atụmatụ a nke ụlọ ọrụ ahụ, nke na-enwekarị ụbọchị mgbe ọ na-eweta ekwentị ya dị elu. Enweghị ihe ekwuru banyere nke a ugbu a. Ya mere, anyị ga-echere oge ruo mgbe anyị ga-amatakwu banyere ya. Nke nta nke nta anyị na-amụta ihe banyere ekwentị mpịachi a na Samsung. Akụkọ banyere ụlọ ọrụ ahụ kesara na CES 2019 na-enye anyị echiche doro anya gbasara ụdị a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung gosipụtara data ọhụrụ na ekwentị mpịachi ya na CES 2019
"Ekwentị dị gịrịgịrị mgbe mkpughe karịa mgbe anyị n'ogige atụrụ ya na-arụ ọrụ dị ka a smartphone" dị ka doro anya nri?
Zaghachi alexander oliva garcia
WhatsApp ga-enye gị ohere izipu ọtụtụ faịlụ ọdịyo n'otu oge
Hisense U30, ekwentị gosipụtara na CES nwere igwefoto dị n'ime ya na ihe mmetụta 48 MP